१७८९ ई. देखि सुरु भएको फ्रान्सिसी क्रान्ती फ्रान्सको दलित जनताले खेप्दै आएको असमानता, उत्पीडन र अत्याचारको विरुद्ध आक्रोशको आह्वान थियो । फ्रान्सको क्रान्ती समाजमा रहेको असन्तोषको प्रतिक थियो । यस क्रान्तिले त्यसताका फ्रान्समा मात्रै होइन लगभग सम्पूर्ण युरोपमा पनि पराधिन जातिहरुमा स्वतन्त्रताको भावना जागृत गराएको थियो । जुन कुरा त्यस बेलाका युरोपीय देशहरुको साशकहरुलाई मन परेको थिएन ।
खासगरी रुसलाई र त्याहाँका जारशाहीलाई फ्रान्सिसी क्रान्तिसँग घृणा नै थियो । जसरी अहिले नेपाली आधुनिक महेन्द्रवादीहरुलाई मधेश आन्दोलनसँग छ । १८१५ ई. तिर रुसका जार अलेक्जेण्डरले फ्रान्सिसी क्रान्तिबाट जनतामा आएको जागृति जुन कि शोषित जनताका लागि ठूलो उपलब्धि थियो । त्यो उपलब्धिलाई रोक्न एउटा अस्त्र त्यार पारे । त्यो अस्त्र थियो “स्थिरता बिना कसैले उपलब्धिको सदुपयोग गर्न सक्दैन । अथवा अर्को अर्थमा भनुपर्दा शान्ति बिना विजयको अनुभूति हुन सक्दैन ।” जार अलेक्जेण्डरले यो अस्त्रको प्रयोगका लागि धार्मिक कट्टरतालाई आफ्नो मार्ग बनाए । जसरी कि नेपाली साशक समुदाय यही अस्त्र प्रयोगका लागी उग्र राष्ट्रियताको मार्ग अपनाएका छन् ।
जारले फ्रान्सिसी क्रान्तिलाई इसाई धर्म विरोधी भनेर प्रचारित गरे जसरी कि नेपाली शासक समुदाय मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रियता र अखण्डता विरुद्धको आन्दोलन भनेर प्रचारित गर्दै आएका छन् । जारले धार्मिक कट्टरताको आडमा अस्थिरता फैलाउदैँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युरोपीय केही देशहरुको फ्रान्सिसी क्रान्ति विरुद्धको एउटा मत निर्माण गरे जसरी नेपाली शासक समुदायले मधेश आन्दोलनको विरुद्ध अन्तरपार्टी मधेश विरोधी मत निर्माण गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका छन् ।
माओवादी जनयुद्ध र मधेश अन्दोलनले जनतामा जगाएको जागृतिलाई सदुपयोग गर्न नदिनका लागि नेपाली शासक समुदायलाई जारको त्यो शस्त्र प्रयोगका लागि शोषित समुदायकै प्रतिनिधिहरुबाट थप मद्दत पनि प्राप्त भइरहेको छ । जसले नेपाली जारहरुलाई थप सजिलो भएको छ । खास गरी शोषित समुदायको प्रतिनिधिको रुपमा देखिएका मधेशी मोर्चा शासक समुदायले चाहेको अस्थिरतालाई नै प्रश्रय दिइरहेका छन् ।
घरी यता घरी उता गरेर राजनीतिक अस्थिरताको मतियार बनेर जनतामा नैराश्यता बढाएर मधेशी मोर्चाले उत्पीडित जनतामा आएको जागृतिको उपलब्धीलाई धुमिल पार्दैछन । यसर्थ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तै मधेशी मोर्चा पनि नेपाली जार नै हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी उत्पीडित जनताहरुसँग प्रत्यक्ष घात गर्दैछन् भने मधेशी मोर्चा अन्तरघात गर्दैछन् । खासै तात्विक भिन्नता छैन यिनीहरु सबै नेपाली जार नै हुन् ।